Vondrona GEM : lany filoha indray Rtoa Noro Andriamamonjison | NewsMada
Vondrona GEM : lany filoha indray Rtoa Noro Andriamamonjison
Vita ny zoma 26 febroary teo, ny fifidianana ho filohan’ny Vondrona mpandraharaha eto Madagasikara (Gem). Lany ho filohany indray, Rtoa Andriamamonjisarison Noro, efa voafidy tamin’ny taona 2013. Fe-potoana fanintelony ity horaisin’ity mpandraharaha, manana ny maha izy azy amin’ny lafiny fandraharahana ity. “Efa tsinjo dieny mialoha ny hahalany azy indray noho ny fahavitrihany”, hoy ireo mpandraharaha tsy miankina mpikambana ao amin’ny Gem, toy ny fanehoany ny fahasahiany hatrany hiaro ny sehatra tsy miankina.
Miantoka ny 77%-n’ny hetram-panjakana
Tsorina, fa anisan’ny manana ny lanjany eo amin’ny toekarena ary mahasahana ny fiainam-pirenena ankapobeny mihitsy ny vondrona Gem. Hanamarinana izany, ahitana fikambanana sy sendikàn’ny mpandraharaha tsy miankina 16, vondrona mpandraharaha enina isam- paritra, ary orinasa tsy miankina 62. Raha aravona, orinasa maherin’ny 1.500 ny mpikambana.
Raha ampiakarina ny adihevitra, mitondra ny 45%-n’ny Vokatra anatiny faobe (PIB) eto Madagasikara ny Gem. Miantoka ny 45%-n’ny fiahiana ara-tsosialin’ny mpiasa ary 77% be izao ny hetra miditra amin’ny fanjakana sy ny firenena.